Cabdirashiid Janan Muu Isa Soo Dhiibay Mise Heshiis Buu La Galay Dawladda? | Gaaroodi News
Cabdirashiid Janan Muu Isa Soo Dhiibay Mise Heshiis Buu La Galay Dawladda?
Saraakiil sare oo ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maalintii Arbacadii ku soo dhaweeyey magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo, wasiirkii hore ee amniga maamul goboleedka Jubbaland, Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo ku magac dheer Janan.
Wasiiru dawlaha gaadiidka, Cabdiraxmaan Dheere iyo wasiir ku xigeenka warfaafinta, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, oo hoggaaminaya wefti ka socda dawladda iyo saraakiisha maamulka degmada ayaa Cabdirashiid Janan ku qaabilay magaalada.
Cabdirashiid Janan waxa la socday ciidamo faro badan oo isaga ka amar qaata, kuwaas oo dhawr jeer oo hore dagaalo la galay ciidamada dawladda. Waxaanay dawladu sheegtay in ay ciidamadaasi ka mid noqon doonaan ciidamada dawladda.
Janan ayaa horey ugu eedeynaa “dembiyo dagaal” balse ma cadda sida dacwaddii maxkamadda laga yeelayo iyo waxa dhabta ah ee isaga iyo dowladda ay ku heshiiyeen. Laakiin warbaahinta qaar ee dowladda waxay hadalka u dhigeen in “uu isa soo dhiibay”.
Haddaba, ma isa soo dhiibay mise heshiis buu qaatay?
Wareysi uu siiyay BBC Somali, Cabdirashiid Janan wuxuu ku sheegay: “Dawladda Soomaaliya waxaan ku heshiinay in khilaafkii la af-jaro, laga heshiiyo shacabka Soomaaliyeed na loo turo.”
“Dawladnimada ummada Soomaaliyeed mudo ka maqnayd oo furaheedii hadda la helay, laga wada shaqeeyo sida qaranimadeedii iyo sharafteedii loo soo celin lahaa, khilaafkana la xiro.” Ayuu yidhi Janan oo hadalkiisu u ekaa in heshiis uu la galay dowladda.
Wuxuu tilmaamay in dowladda ay muddaba dooneysay in la xalliyo khilaafka. Wuxuu yidhi “xaqiiqiyan mudo dheer oo sannad ka badan waxay dawladda dhexe u taagnayd in arrintaan la xaliyo, arintaas iyada ahna maanta ayuu Ilaahay suurto geliyey”.
Balse, bogga Facebook ee telefishinka Qaranka Soomaaliya ayaa lagu qoray in Janan isa soo dhiibay.
Dhanka wasiir ku xigeenka warfaafinta Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, oo la hadlay laanta Af-Soomaaliga ee BBC-da, ka dib markii ay kulmeen Janan, wuxuuna sheegay in arintaa lagu gaadhay heshiis muddo laga shaqaynayey, kaas oo suurto geliyey in haatan Cabdirashiid Janan iyo ciidamadii uu hoggaaminayey ay u wareegeen dhanka dawladda.
Hadalkaas wuxuu u muuqdaa mid meesha ka saaraya in Janan isa soo dhiibay, balse uu ku yimid heshiis labada dhinac dhexmaray. Si kastaba, lama garanayo waxa dhabta ah ee ay ku heshiiyeen.
“Dedaal mudo dheer soo socday oo wadahadal uu dawladda la lahaa ayaa si guula ku soo dhamaaday. Markaa wasiirka iyo dawlada heshiis rasmiya ayaa dhex maray. Waana dhamaadeen wixii madmadow ama khilaaf ahaa ee wasiir Cabdirashiid iyo dawladda ka dhex jiray,” Ayuu yidhi wasiir Al-Cadaala.
Isaga oo ka jawaabayay su’aal ahayd waxa ay ku heshiiyeen in uu faahfaahiyo, waxa uu yidhi: “Waxaan ku heshiinay in si wada jir ah nabadgelyada iyo midnimada ummada Soomaaliyeed iyo gobolka Gedo looga shaqeeyo.
“Dabcan tanaasul xagiisa ka yimid oo la xiriira duruufaha iyo marxaladaha wadanku uu ku sugan yahay iyo dabcan dededaal ay dawladdu ku bixisay sidii isfaham looga gaari lahaa arimahaa, ayaa arintaasi ku timid,” ayuu yiri.
Janan ayaa dowladda dagaal kula jiray tan iyo markii uu ka baxsaday xabsigii Muqdisho ee uu ku xidhnaa. Cabdirashiid Janan wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiinta ugu caansan maamulka Jubbaland ee tiirarka adagna u ahaa, hase yeeshee haatan wuxuu u wareegay dhanka dowladda.
Janan waxaa horey u eedeeyay hay’adaha xuquuqda aadanaha oo sheegay “in uu dembiyo dagaal ka geystay gobolka Gedo”. Arrintaa waxay ka mid ahayd sababihii ay dowladda Federaalka u xirtay.
Hay’adaha oo markii uu xabsiga ka soo baxsaday ka dib ka dalbaday Kenya in Janan ay ku wareejiso Soomaaliya si “cadaaladda loo mariyo”, ayaa hadda markale ku celisay in cadaalad ay helaan ehellada dhibbaneyaasha.
Warqoraal ah oo barteeda Twitter-ka ku qortay waxay ku tidhi: “Maadaama hadda uu Cabdirashiid Janan ku jiro gacanta dowladda federaalka Soomaaliya, waa in la xaqiijiyo in caddaalada la waafajiyo lagulana xisaabtamo dhammaan eedaha lagu sheegay ee xadgudubyada bani’aadannimo ee ka dhacay Gedo.”
“Dhibbaneyaasha iyo qoysaskii ay dhibaatadu gaadhay waxay mudan yihiin in ay caddaalad helaan.”
Waayihii uu soo maray Cabdirashiid Janan?
“Baaritaanka iyo maxkamadeynta Cabdirashiid Janan waa in ay horseedaan xilli ay cadaalad helaan dadka dhibanayaasha ah ee xuquuqdooda aadanaha lagu tuntay iyo qoysaskooda ku sugan Soomaaliya”, ayuu hadalka ku sii daray
Dhammaan eedahaasi Cabdirashiid Janan gaashaanka ayuu u daruuray wuxuuna sheegay inay warar aan jirin buunbuubinayaan dadka diiddan sida wanaagsan ee uu wax u maamulo, inta badanna dadka deegaannada uu ka taliyana ay isaga taageersan yihiin